I-Android yePC: ungayifaka njani, i-emulators, amaqhinga kunye nokunye okuninzi! | Iindaba zeGajethi
Ufuna faka i-Android kwikhompyuter? Ukulingiswa kweenkqubo zokusebenza bekusoloko kwaye kuya kuba lolunye ukhetho olufanelekileyo lokujonga ukuba inkqubo yokusebenza okanye usetyenziso lwayo luyahambelana neemfuno zethu, ukuthanda izinto okanye ukhetho lwethu. Nangona oku akusoloko kunjalo, kuba eyona njongo ye-arcade emulators okanye ii-consoles ezindala kukwanelisa iinkumbulo zethu zobuntwana.
Ukushiya ecaleni iimfuno esinokuthi sisebenzise i-emulator, kweli nqaku ndiza kugxila ekuboniseni ukuba zithini Iimpawu eziphambili ze-Android ze-PC, Emulators eziza kusivumela ukuba sivavanye nasiphi na isicelo se-Android kwikhompyuter yethu, nokuba siyisebenzise ngendlela ekhululekile ngebhodi yezitshixo, enje ngeWhatsApp, okanye ukufumana esona sicelo silungileyo sihambelana neemfuno zethu ngaphandle kokugcwalisa i-smartphone yethu inkunkuma ye-Android ngelixa sibavavanya.
Zonke iiemulators endikubonisa zona kolu luhlu zilungelelanisiwe ukuze sikwazi Sebenzisa usetyenziso kunye nemidlalo ngekhibhodi kunye nempuku kwikhompyuter yethu. Abanye bade basivumele ukuba sisebenzise i-touch interface yekhompyuter yethu, esivumela ukuba sidlale ngokungathi siyayenza kwithebhulethi ye-Android, ukuba isicelo okanye umdlalo ulungisiwe.
1 Ubuncinci beemfuno zePC
2 Sebenzisa umatshini obonakalayo
3 Uyifaka njani i-Android kwi-PC
3.9 Umdlali we-Nox
Ubuncinci beemfuno zePC
Okokuqala, gcinani engqondweni ukuba ayingabo bonke abalingisi abaneemfuno ezifanayo Ngokubhekisele kwimigaqo eyimfuneko yokufaka usetyenziso kwi-PC yethu, ke kuya kufuneka siyithathele ingqalelo le nto ngaphambi kokubandakanyeka kufakelo olunokuthatha ixesha elide kunesiqhelo kwikhompyuter yakudala kwaye ukunxibelelana nohlobo lwe-Android olufakelweyo kuhamba kancinci kangangokuba singabinako nxibelelana nayo.
Ukuba uthenge ikhompyuter yakho ixesha elincinci, kunokwenzeka ukuba ine-4 GB ye-RAM kunye neprosesa enamandla ngokwaneleyo okuhamba ngokulula. nayiphi na i-emulator endikubonisa yona kweli nqaku.
Ngakolunye uhlangothi, uceba ukuyifaka kwikhompyuter endala olala kuyo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba ukuze i-emulator isebenze ngokufanelekileyo, ifuna ubuncinci be-1 GB, ngcono 2 ukuba kunokwenzeka. Ngokuphathelele kwiprosesa, isantya esisebenza ngokuchanekileyo ngaso 1,2 IGz. Isithuba esifunekayo sokufaka nayiphi na i-emulators kukudlula okwenyani, nokuba kufuna ukuya kuthi ga kwi-25 GB yendawo.
Umzobo wekhompyuter yethu awubalulekanga, kuba ujongano lomzobo ihamba ibulela ukudityaniswa kwikhompyuter yethu kwaye isantya sayo siphezulu, ukusebenza kwe-emulator kuya kuba phezulu.
Sebenzisa umatshini obonakalayo
Uninzi lwabalingisi esikubonisa kulo kweli nqaku, ifuna ukufakwa kwihard drive ecaleni, into abasebenzisi abaninzi abanayo kwi-PC yabo. Ngaphandle kokuba kukusetyenziswa ekuphela kwento esifuna ukuyinika ikhompyuter apho siza kuyifaka khona, eyona nto sinokuyenza kukusebenzisa umphathi womatshini onje ngeVMWare okanye iVirtualBox, ngale ndlela, xa sidiniwe yile nguqulo, singasusa ngqo ngaphandle kokuchaphazela ukusebenza kwekhompyuter yethu.
Kodwa kwakhona, sisisombululo esihle kakhulu ukuba le nto siyifunayo soloko uneemulators ezahlukeneyo ze-Android efakwe kwi-PC yethu ukuze sisebenzise ngokupheleleyo imisebenzi umntu ngamnye kuthi asinika yona, ukusukela njengesiqhelo, abanye basilela kwaye ngokuchaseneyo.
Uyifaka njani i-Android kwi-PC
Kwiminyaka yakutshanje, esinye sezisombululo ukuba ukusebenza ngcono kunye nokukhetha esikunika kona xa silingisa i-Android kwiPC yethu yiBlueStacks. Ewe, ukuba unekhompyuter endala, andikukhuthazi ukuba uzame ukuyifaka, kungekuphela ngenxa yexesha elithathwa yinkqubo, kodwa ngenxa yokuba ukusebenza kwe-emulator kushiya into oyifunayo. Izinto ezifunwa ngulo mntu we-emulator zikhuthazwa linani elikhulu lokukhetha ekunikezelayo xa kufikwa ekufumaneni okuninzi kwi-Android.
I-BlueStacks yenye yeemulators ezimbalwa ezithi idibanisa iinkonzo zikaGoogle zokuDlala, ukuze sikwazi ukungqamanisa idatha yeakhawunti ye-smartphone yethu kunye ne-emulator kwaye sikwazi ukufikelela ngokuthe ngqo kuzo zonke izicelo esele sizithengile kunye nesiphelo sethu se-Android. Ukongeza, iyahambelana nomsebenzi wokuchukumisa ukuze sikwazi ukusebenzisa usetyenziso okanye imidlalo enxibelelana ngqo kwiscreen sePC yethu, endaweni yokusebenzisa ikhibhodi kunye / okanye imouse.
Mhlawumbi, i-AndyOS sesinye sezona zisombululo zibalaseleyo sinokufumana ukonwaba okanye ukusebenza yonke imihla nge-Android kwi-PC yethu, kuba yeyona inikezela ngamava amahle nge Umdibaniso ogqibeleleyo olungiselelwe i-PC yethu. I-100% iyahambelana neGoogle Play ukuze sizonwabele ngaphandle kwengxaki ukufikelela kusinika kwivenkile yesicelo sikaGoogle kwaye sizame enye emva kwenye yonke imidlalo kunye nokusetyenziswa esikufunayo.
Ukuba asifuni kubenza nzima ubomi bethu ngoomatshini ababonakalayo, uGI-emymotion ngokuzenzekelayo yenza umatshini obonakalayo ukugqibelela ukuyifaka kamva kwi-Android, ikwahambelana nazo zombini iPC kunye neLinux kunye neMac.Ngapha koko, iyahambelana nekhamera yekhompyuter yethu, ke siya kuba nakho ukuyisebenzisa ngokungathi iyinyani ye-Android okanye ithebhulethi.
I-RemixOS ifike kwintengiso njengentsikelelo kubo bonke abo basebenzisi abafuna indlela ekhawulezayo nelula yokonwabela imidlalo yabo okanye usetyenziso kwiPC. Ngelishwa, njengoko ifikelele kwintengiso, ishiye, kwaye abaphuhlisi bakhethe ukuyishiya iprojekthi ukuze bazinikezele kwezinye iiprojekthi ezinengeniso kuqoqosho ukusukela oko bekukho ukuphehlelelwa kwale nguqulo ye-Android yePC, kwakusimahla kwaye kuvaliwe umoya, owaziyo, akukho mntu uphilayo.
I-RemixOS isebenza nge-Android 6.0, ingomnye wabambalwa kuthi unikezela ngoluhlobo lwamva nje lwe-Android simahla kwaye lolunye lolona khetho lubalaseleyo ukuba sifuna ukulusebenzisa ukudlala. Njengoko isimahla, sinokuyifumana kwinani elikhulu lamaphepha ewebhu okanye ukukhuphela iisayithi nangona ingasafumaneki kwiwebhusayithi yonjiniyela. I-RemixOS isivumela ukuba senze ngokwezifiso inani elikhulu lokukhetha ukwenza ngokwezifiso uguqulelo lwe-Android kwiimfuno zethu kunye nezinto esizithandayo, kodwa inomda omnye kwaye oko akuhambelani neeprosesa ze-AMD.
Ukuba ukongeza ukonwabela imidlalo ye-Android okanye usetyenziso kwiPC yakho, uyafuna irekhoda isikriniI-KoPlayer inokuba sisicelo esifanelana neemfuno zakho. Ngeemfuno ezifanelekileyo, iKoPlayer yenye indlela elungileyo yokurekhoda iividiyo zemidlalo, usetyenziso okanye ukuqhuba nje nasiphi na isicelo esifunyenwe kuphela ngaphakathi kwindalo yeGoogle, i-Android.
Ndiyabulela kolu lwandiso lweChannel sinokonwabela usetyenziso olufumaneka kuGoogle Play ngaphandle kokuthatha indawo enkulu kwi-hard drive yethu kunye ne-emulator epheleleyo nayo Ifuna isixhobo esinamandla aphakathi. Ukuba sisiphelo se-Android, into uGoogle angayithandi kakhulu, olu lwandiso alufumaneki kwiVenkile kaGoogle Chrome, ke kuya kufuneka siye kwiGitHub ukuyikhuphela kwaye siyonwabele.
I-Manymo ayisebenzi njengolwandiso kodwa phantse, kuba iyi-emulator ye-Android kwiwebhu ngamanye amaxesha inokusebenza musa ukukhawuleza njengoko sifuna ngakumbi xa kusenziwa usetyenziso okanye imidlalo, kodwa isinika ithuba lokuba singafaki nasiphi na isoftware kwikhompyuter yethu ukuba sifuna ukulinganisa i-Android ukuvavanya usetyenziso oluthile.
UMemu usinika ukugqibelela I-emulator ye-Android 5.1 ehambelana neeprosesa ze-Intel okanye ze-AMD. Ngokusebenzisa imenyu yebar, ebekwe kwelinye lamacala, sinokumisela ukusebenza kwemouse kunye nebhodi yezitshixo ukuze ihambelane neemfuno zethu zombini xa udlala naxa usebenza.
Kweli nqaku sizamile ukushwankathela ukhetho kuzo zonke izinto ozithandayo kunye neemfuno, ukusuka kwiinguqulelo ezigcweleyo ezisebenza kwaye zisebenze ngokuzimeleyo, ngokusebenzisa izandiso okanye i-Vis web emulators zokugqibela neemulators kwifom yesicelo. Ngoku kuya kufuneka ubone ukuba yintoni ukhetho olulungele iimfuno zakho.
Ukuba injongo ofuna ukuyinika i-Android kwi-PC yakho ayikukudlala, kodwa ufuna ukusebenzisa i-Instagram, WhatsApp kunye nenye into encinci I-Nox sesinye sezona zisombululo zilula kwaye zikhawulezayo esinokuyifumana kwimarike. Isinika ukufikelela ngokuthe ngqo kuGoogle Play ukuze sikwazi ukusebenzisa le nguqulo ukuvavanya usetyenziso ngaphambi kokuzifaka kwi-smartphone yethu, ukuthintela ukuzaliswa yinkunkuma ezishiywa zizicelo njengoko sizicima.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-Android yePC
Ezi zezinye zezona zinto zintle kakhulu kwiAmazon's Black Fridady yanamhlanje